Somalia -Liiska Musharaxiinta Doorashada Madaxweynaha Somalia Oo Guddiga Doorashadu Ku Dhawaaqay (Sept. 6, 2012) | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > SOMALI ELECTIONS	> Somalia -Liiska Musharaxiinta Doorashada Madaxweynaha Somalia Oo Guddiga Doorashadu Ku Dhawaaqay (Sept. 6, 2012)
Thursday, September 6, 2012 Laaska News
Guddiga doorashada Madaxweynaha ayaa caawa soo saaray musharaxiinta u tartamaya doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya,musharaxiintaas oo buuxiyay shuruudihii doorashada ee uu soo jeediyay guddiga doorashada,waxayna tiradoodu tahay 25 musharax.
Doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in la qabto 10/9/2012.
Musharaxiinta ayaa la sheegay inay labada maalmood ee foodda inagu soo haya ay baarlamaanka hortagi doona oo ay ka jeedin doonaan barnaamijkooda musharaxnimo.
Afhayeenka Guddiga Doorashada ayaana kaga dhawaaqay caawa (6/9/2012) , caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Magacyada musharaxiinta -u tartamaya Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia – ee laqabanayo haddii Alle Idmo ( Sept 10, 2012) ee Guddiga Doorashada uu shaaaciyay waxay magacyadoodu kala yihiin:
2. Ibraahim Cali Xuseen.
3. Bashiir Nuur-Bidaar Xasan.
4. Xasan Shiikh Maxamuud.
5. Xuseen Khaliif Jaamac.
6. Saciid Ciise Maxamuud.
7. Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi.
8. Salaad Cali Jeelle.
9. Shariif Shiikh Axmed.
10. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
11. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi.
12. Cabdiraxmaan Macalin Cabdillaahi (Baadiyaw).
13. Cabdiqaadir Cosoble Cali.
14. Cabdillaahi Amed Caddaw.
15. Cabdiwaaxid Cilmi Cumar (Goonjeex).
16. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
17. Cali Maxamed Ismaaciil Yaasiin.
18. Cismaan Maxamed Gacal.
19. Cumar Salaad Cilmi.
20. Maxamed Axmed Saalax.
21. Maxamed Cadilaahi Maxamed (Farmajo).
22. Maxamed Cabdillaahi Oomaar.
23. Maxamed Cabdiwali Shiikh Yuusuf.
24. Maslax Maxamed Siyaad.
25. Yuusuf Garaad Cumar.
Somalia:International community reaffirm their support to the efforts of all involved in the Transitional process (laaska.wordpress.com)
Somalia – 10 Musharax Oo Barnaamijkooda Siyaasadeed Ka Hor Jeediyay Baarlamaanka (Sept.7,2012) Somalia Election – Musharaxiin Buuxiyay Shuruudaha Doorashada Oo Magacyadooda La sheegay ( Sept. 5, 2012)